ဘူဒါပက် မတ်လထဲမှာပျော်မွေ့ဖို့အများကြီးကောင်းသောနွေဦးပွဲတော်နှင့်အတူဆောင်းတွင်းအအေး၏အဆုံးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့. စနေနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေအထူးသဖြင့်အတွင်းတင်ဆောင်နေကြသည် မတ်လ. အမျိုးမျိုးသောနေရာများနှင့်ဖြစ်ရပ်များဘူဒါပက်အတွက်စီရင်ကျင်းပ. နောက်ထပ်ပိုပြီး, အကြီးဆုံး Dohany လမ်းတရားစရပ်အပါအဝင်ဘူဒါပက်အတွက်အများအပြားတရားစရပ်တို့၌. ထို့အပွငျ, ဘူဒါပက်အတွက်ဂျူးလူမျိုးနိုင်ငံသားတွေများအတွက် Balint အိမ်အသိုင်းအဝိုင်းအလယ်ဗဟိုစီရင်ဘို့ဖြစ်ရပ်များကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်.
အခုတော့ Ariel ကအတန်းထဲတွင်ဒုတိယနှစ်တွင်အဘို့အဖှဲ့စညျး – ဂျူးကျောင်းသားများဂျီနီဗာပြည်ထောင်စု. တကယ်တော့, ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 300 ကျောင်းသားများအတွက် အောက်ပါနိုင်ငံများမှနှင့်လူငယ်လူကြီးများ: ဆွစ်ဇာလန်, ပြင်သစ်, ဘယ်လ်ဂျီယံ, သြစတြီးယား, နှင့်အခြားသောအရပ်တို့ကို. ဤရွေ့ကားစီရင် ပါတီ goers တစ်မူထူးခြားတဲ့ကျော်အတူတကွစီရင်ဆင်နွှဲဖို့ဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ် တနင်္ဂနွေ ဇူးရစ်အတွက်. အဘို့ လက်မှတ်တွေ နှင့်ပိုပြီးအချက်အလက်, ကူးခေါင်း Ariel facebook စာမျက်နှာ.
ဒီနှစ်, ဆင်နွှဲ အတွက်စီရင် ပဲရစ်. အလင်း၏စီးတီး, ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်များ၏စီးတီး, အနုပညာများ၏စီးတီး. ဒါဟာအစယခုမယုံနိုင်စရာ Young ကဂျူးလူမျိုးများ၏စီးတီးဖြစ်ပါသည် Morristownစီရင်ပါတီ! သင့်ရဲ့အများဆုံးကြော့နှင့်အတူလာကြ Parisian စီရင်ဝတ်စုံများ. သငျသညျဝိဇ္ဇာစင်တာဖျော်ဖြေသည့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Mayo အဘိဓါန်မှာဒီပါတီရှာတှေ့နိုငျ Morristown. အဆိုပါဖြစ်ရပ်သူ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ် အသက် Young ကဂျူးလူမျိုးပညာရှင်များများအတွက် 21 သို့ 39. လက်မှတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါ ဒီမှာ
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/celebrate-purim/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)